Shaqaalaha Garoonka Aadan Cadde oo shaqo joojin sameeyay – news
MUQDISHO, Soomaaliya - Shirkadda FAVORI L.L.C. ee laga leeyahay Turkiga ayaa shaqada ka cayrisay in ka badan 50 kamid ah shaqaalihii muruq-maalka ahaa ee ka shaqeynayay Garoonka diyaaradaha Caalamiga ee Aadan Cadde International Aiport.
Arintan ayaa keentay in shaqaalaha ay maanta sameeyaan Shaqo joojin, iyagoo sidoo kale banaanbax ka dhigay afaafka hore ee Garoonka illaa wadada aada Isgoyska KM-4, si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin inay shirkad ajnabi ah shaqada ka saarto muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Waxaa hakad galay mudo saacado ah isku socodka wadada isku xirta Garoonka iyo KM4, waxaana markii dambe xaaladda soo farageliyay Ciidanka Booliska, oo kala eryay dadkii dhigayay dibadbaxa, oo xoog iyo qoriga caaradiisa loo adeegsaday.
FAVORI L.L.C. ayaa tan iyo September, 2013 gacanta ku haysay maamulka Garoonka, iyadoo heshisi 5 sano ah kula jirtay dowladda Soomaaliya kaasoo Baarlamaannka si juujuub ah looga meel-mariyay, wuxuuna ku ekaa 2018.
0 Comments Topics: garoonka diyaaradaha
Warar 27 August 2020 18:43